दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पनि असारमै खर्च गर्ने भो ६० प्रतिशत बजेट – Nepal Japan
नेपाली समय : 09:48:06
जापानी समय : 01:03:06
21 May, 2019 14:36 | अर्थ | comments | 45600 Views
नेपालमा एक वर्षमा एउटा सरकार बन्ने गरेकाले राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो र विकास भएन भन्ने सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरु (जो पटकपटक सरकारमा पुगेका थिए)हरुको थियो । संविधान जारी भएपछि यही नारालाई मुख्य एजेण्डा बनाइयो र नेकपाले झण्डै दुई तिहाई बहुमत हाँसिल गर्यो ।
तर, अरु दलको समेत समर्थनमा दुई तिहाईको सरकार बनेको झण्डै डेढ वर्षमा मुलुकमा तात्विक रुपमा देखिने विकासका कुनै काम भएका छैनन् । तथ्यांक जस्तोसुकै सार्वजनिक गरे पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र विकास गर्न सरकार असक्षम रहेको प्रष्टै देखिएको छ ।
पछिल्लो समय नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार बनेपछि विकासले गति लिने धेरैको अपेक्षा थियो । तर यो सरकारले पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । चालू खर्च बढ्दै जाने तर विकास खर्च हुनै नसक्ने अवस्था अहिले कायम छ । सम्भवतः अबको केही सातापछि दैनिक अबौएं रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब सार्वजनिक हुनेछ । किनभने नेपालको विकास असारे भेलसंगै बगाएरआफू पालिने परिपाटी चलेको छ ।
दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारको हालत किन यस्तो त ? के सरकारमा बस्नेहरु नालायक भएर हो वा कर्मचारीको असहयोग ? प्रश्न दुबै सही छ । अर्थविदहरुको भनाइमा कर्मचारीयन्त्रले बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउँदा जनताको विकासको चाहना बन्धक बनिरहेको छ ।
तर, यसको कारण खोज्ने कि नखोज्ने ? काम नगर्नेलाई हटाएर काम गर्नेलाई ल्याउने कि नल्याउने । अनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिकरण हुनबाट अब पनि नरोक्ने हो भने देशमा व्यवस्था नै अभिषापको रुपमा स्थापित हुनेछ ।
सरकारले बनाएको योजना र लक्ष्य खराब थिएन तापनि सो अनुरुप किन काम हुन सकेन ? किन हरेक वर्ष चालु खर्च र विकास खर्चबीचको अन्तराल बढ्दो छ ? गणतन्त्र आएलगत्तैको आर्थिक वर्षमा चालु र विकास बजेट बीचको अन्तर ३७ अर्ब थियो । गत आर्थिक वर्ष मा त्यो बढेर ४ खर्ब २६ अर्बमा पुगेको छ ।
गणतन्त्र आएपछिको आर्थिक वर्ष २०६३।६४ मा सरकारले ७७ अर्ब १२ करोड चालु खर्च गरेको थियो । तर, ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विकास बजेटमा खर्च भएको थियो । अन्तर ३७ अर्बको थियो । यो अन्तर हरेक आर्थिक वर्षमा बढ्दै गएको छ ।
बाँकी अवधि अस्थिर सरकार थियो भनेर छोड्ने हो भने पनि संविधान जारी भएपछि आव २०७३।७४ मा चालु खर्च ५ खर्ब १८ अर्ब पुग्यो । विकास बजेट भने २ खर्ब ८ अर्ब मात्र खर्च भयो । गत आव २०७४।७५ मा ६ खर्ब ९६ अर्ब चालु खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च २ खर्ब ७० अर्ब थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्रै बाँकी रहँदा विकास खर्च एक खर्ब ३० अर्ब भएको छ । अब झण्डै १ खर्बभन्दा बढी विकास बजेट जेठ र आसारमै खर्च हुने अनुमान छ । यसैबाट देखिन्छ नेपालको विकास सतहमा हैन कागजमा मात्र देखिन्छ ।
किनभने १० महिना सुतेर बस्ने सरकार, विकासे निकाय र मन्त्रालयहरु असार लागेपछि विकास खर्चको आधाजसो रकम खर्च गर्छन् । त्यसको नतिजा काम जस्ताको तस्तै बजेट स्वाहा । विगत ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा यो अझै प्रष्ट हुन्छ । आव २०७०।७१मा ४०.६, २०७१।७२ मा ४५.९ प्रतिशत ०७२।७३ मा ४७ प्रतिशत, ०७३।७४ मा ४१.२ प्रतिशत र ७४.७५ मा ३९.४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असार महिनामा भएको थियो ।